﻿Download I-Windows Internet Explorer 9 ye-Windows Vista kanye ne-Windows Server 2008. from Official Microsoft Download CenterWarning: This site requires the use of scripts, which your browser does not currently allow.See how to enable scriptsDownload CenterMenuSearchSearch Download Center
Uhlelo:9.0.7930.16406Igama Lefayela: IE9-WindowsVista-x86-zul.exeUsuku Ekhishwe Ngalo:25-05-2011Usayizi Wefayela: 17.8 MB
I-Windows Internet Explorer 9 iletha amasayithi wewebhu kanye nezinhlelo ezibukeka nezisebenza njengezinhlelo ze-PC ngamandla we-Windows. Shesha: I-Internet Explorer 9 ishesha kakhulu. Yakhelwe ukusebenzisa ngokuphelele ihadiwe ye-PC yakho ngeWindows, I-Windows Internet Explorer 9 ikulethela imifanekiso ebukhazikhazi kanye nokuzizwa okucwiilisayo okusheshayo njengezinhlelo ezifakwe kwi-PC yakho.
Isikhala se-Hard Drive:I-Windows Vista ene-Service Pack 2: 70MBI-Windows Server 2008 ene-Service Pack 2: 150MB
Lokhu kwehlisa okwe-Microsoft Windows Vista SP2 kanye ne-Windows Sever 2008 SP2 kuphela. Ukwehlisela i-Internet Explorer 9 amanye amaveshini axhasiwe we-Microsoft Windows: I-Windows Internet Explorer 9 ye-edishini ye-Windows Vista SP2 64-bit kanye ne-edishini ye-Windows Server 2008 SP2 64-bit. I-Windows Internet Explorer 9 ye-Windows 7 kanye ne-Windows 7 SP1 . I-Windows Internet Explorer 9 ye-edishini ye-Windows 7 64-bit, i-edishini ye-Windows 7 SP1 64-bit, i-edishini ye-Windows Server 2008 R2 64-bit kanye ne-edishini ye-Windows Server 2008 R2 SP1 64-bit.